 Ma ndị ahụ Chineke gụrụ dị ka ndị tozuru etozu inwe ndụ ebighị ebi agaghị alụ di na nwụnye mgbe ndị nwụrụ anwụ ga-esi nꞌọnwụ bilie, nꞌihi na ha agaghị anwụkwa ọzọ, kama ha ga-adị ka ndị mmụọ ozi. Ha bụ ụmụ Chineke nꞌihi na Chineke emeela ka ha si nꞌọnwụ dị ndụ ọzọ.
Nke ọ bụla nꞌime ihe e kere eke ndị a nwere nku isii. Nku dị nꞌetiti nku ndị a nwere anyị hiri nne. Ehihie nile na abalị nile ọrụ ha bụ iti mkpu na-asị, “Nsọ, Nsọ, Nsọ, ka Onyenwe anyị Chineke pụrụ ime ihe nile dị. Bụ onye ahụ dịrị nꞌoge gara aga, onye dị ugbu a, na onye ga-adị ruo mgbe nile ebighị ebi.”
 Nke a bụ ihe ịma atụ na-ezi anyị ihe baptizim pụtara. Mgbe e mere anyị baptizim, anyị na-egosi na a zọpụtala anyị site nꞌọnwụ na mbibi nꞌihi mbilite nꞌọnwụ Kraịst. O gosighị na e meela ka anụ ahụ anyị dịrị ọcha nꞌihi baptizim e mere anyị, kama ọ na-egosi na anyị, ndị e mere baptizim na-alọghachikwute Chineke na-arịọ ya ka ọ sachaa mmehie dị nꞌobi anyị. Ugbu a Kraịst nọ nꞌeluigwe. Ọ nọkwa nꞌakụkụ aka nrị Chineke. Ọ bụ ya na-achị ndị mmụọ ozi nile, ndị ọchịchị nile, na ike nile nke eluigwe.
 Nꞌime ọhụ m, anụrụ m olu nke ọtụtụ ndị mmụọ ozi a na-apụghị ịgụta ọnụ ndị gbara ocheeze ahụ na ndị okenye ahụ nile gburugburu, ka ha na-abụ abụ na-asị, “Nwa atụrụ ahụ e gburu kwesịrị ịnara ike nile, na akụ nile, na amamihe, na ume, na nsọpụrụ nile, na otuto nile na ngọzi nile!”
 “Site nꞌebe a tụda onwe gị igosi na ị bụ Ọkpara Chineke. Nꞌihi na e dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Chineke ga-ezite ndị mmụọ ozi ya ka ha ghọta gị. Ha ga-echebe gị, ka ị ghara ịmerụ ahụ.’ ” Ma Jisọs zara sị ya, “E deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị, ‘Ị gaghị anwa Onyenwe gị na Chineke gị ọnwụnwa nzuzu.’ ” Ọzọ, ekwensu kpọọrọ ya gaa nꞌelu ugwu dị elu, gosi ya ụwa nile na ịma mma ya. Ọ sịrị Jisọs, “Aga m enye gị ha nile ma ọ bụrụ na ị daa nꞌala kpọọ isi ala nye m.” Ma Jisọs zara sị ya, “Si nꞌebe m nọ pụọ, ekwensu. Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, ‘Ọ bụ nanị Onyenwe gị Chineke ka ị ga-akpọ isi ala nye, nanị ya kwa ka ị ga-efe.’ ” Mgbe ahụ ekwensu hapụrụ ya laa. Ndị mmụọ ozi bịakwutere Jisọs inyere ya aka.
 Aga m ewerekwa olu opi ike zipụ ndị mmụọ ozi ka ha gaa kpọkọtaa ndị nile a họpụtara site nꞌakụkụ nile nke eluigwe na ụwa. “Ugbu a mụtanụ ihe site nꞌosisi fiigi. Mgbe ọ bụla alaka ya jupụtara nꞌahịhịa ndụ maranụ na ọkọchị na-abịa nso. Otu a kwa, mgbe unu na-ahụ ihe ndị a nile ka ha na-eme marakwanụ na anọ m nso, na ọbịbịa m dị nnọọ nso. Ihe ndị a nile aghaghị imezu tupuu ọgbọ a agabiga. “Eluigwe na ụwa ga-agabiga ma okwu m nile ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi.
 Ma Meri lọghachiri, nọgide nꞌili ahụ. O guzoro nꞌakụkụ ya na-akwa akwa. Mgbe ọ nọ na-akwa akwa, o hulatara ala nyoo anya nꞌime ili ahụ. Ọ hụrụ ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe ọcha. Otu nọdụrụ ala nꞌebe ụkwụ Jisọs dị mgbe ọ tọgbọ nꞌili ahụ. Nke ọzọ nọdụkwara ebe isi ya dị.
 Otu onye nꞌime ndị dere ihe nꞌakwụkwọ nsọ, chere echiche banyere ihe ndị a sị, “Chineke, gịnị mere i ji gụọ mmadụ na-abụghị ihe ọ bụla dị ka ihe? Gịnị mere i ji enwe obi ọcha nꞌebe mmadụ nọ? Gịnị mere gị na nwa nke mmadụ ji enwe mmekọ? Nꞌihi na ọ bụ ezie na nwa ntịntị oge i mere mmadụ ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi. Ma ugbu a i werela ịma mma kpube ya nꞌisi dị ka okpueze. I werekwala ihe nile mee ha ka ha bụrụ ebe mgbakwasị ụkwụ ya.” Chineke edoola ihe nile nꞌokpuru ụkwụ Jisọs. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-adịghị nꞌokpuru ụkwụ ya. Ma anyị adịghị ahụ ka ihe ndị a mezuru ugbu a. Ma anyị ga-ahụ ha mgbe Jisọs ga-abịa ịbụ eze. Ma anyị na-ahụ Jisọs, onye e mere ka ọ dị ala nanị otu mgbe. Onye e mere ka ndị mmụọ ozi dị elu karịa ya, ka ọ hụọ ahụhụ nwụọkwa nꞌihi mmadụ nile. Nꞌihi ọnwụ ọ nwụrụ, Chineke ewerela nsọpụrụ kpube ya nꞌisi dị ka okpueze. E mere ka ọ bụrụ ihe ziri ezi nꞌanya Chineke, onye kere ihe nile, na Jisọs ga-ahụ ahụhụ. Nꞌihi na Chineke sitere nꞌọnwụ ya mee ka ọtụtụ mmadụ bịaruo nso nzọpụta. Ma ahụhụ Jisọs hụrụ mere ya ka ọ bụrụ onyeisi zuru oke nke nwere ike iduba ndị ya na mmeri nke nzọpụta. Jisọs na-eme ụmụ mmadụ ka ha dị ọcha site na mmehie ha. Nꞌezie, onye na-eme ụmụ mmadụ ka ha dị nsọ, na ndị a e mere ka ha dị nsọ nwere Chineke dị ka Nna ha. Nke a mere ihere adịghị eme Jisọs ịkpọ ha ụmụnna ya. Jisọs sitere nꞌọnụ onye dere akwụkwọ Abụ Ọma sị, “Aga m agwa ụmụnna m ihe banyere Chineke bụ Nna m. Anyị nile ga-eji otu olu too ya. Aga m ekwuwa aha Chineke nꞌọgbọ ọha.” Nꞌebe ọzọ nꞌakwụkwọ nsọ, o sitere nꞌọnụ onye ọzọ kwuokwa sị “Aga m eji obi m nile kwere na Chineke. Olileanya nke m, na nke ụmụ Chineke nyere m ga-adịgide nꞌime gị Chineke.” Nꞌebe ọzọ kwa nꞌakwụkwọ nsọ o kwukwara sị “Lee mụ na ụmụ nke Chineke nyere m.”